စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်လေအေးပေးစက်ဖြစ်ခြင်းကြောင့် ပိုမိုကျယ်ပြန့်သော လေ၀င်ပေါက် ပါရှိပါသည်။ ပိုမိုကြီးမားသော ပန်ကာပါရှိပြီး ပိုမိုကျယ်ပြန့်သော လေထွက်ပေါက်လည်း ပါရှိပါသည်။ ထို့ပြင် ပိုမိုကျယ်ပြန့်သော လေ၀င်ပေါက်သည် လေ၀င်မှုနှုန်းကို ပိုမိုများပြားစေပါသည်။ ကြီးမားသော ပန်ကာကြောင့် လေကိုလျင်မြန်စွာ အေးမြစေမှာ ဖြစ်ပါသည်။ ပိုမိုကျယ်ပြန့်သော လေထွက်ပေါက်ကြောင့် လေထွက်နှုန်းကို ပိုမိုများပြားစေပါသည်။ အခန်းတွင်းအပြင်အဆင်တိုင်းနှင့် လိုက်လျောညီထွေသော ခေတ်မီဆန်းသစ်သည့် ခရစ်စတယ်ဒီဇိုင်းပါရှိပါသည်။ Single User Mode ဖြင့် အခန်းတွင်းရှိ လူဦးရေအနည်းအများပေါ် မူတည်၍ BTU ကို လျှော့ချပေးခြင်းဖြင့် စွမ်းအင်ကို ချွေတာနိုင်ပါသည်။2Step Cooling စနစ်ဖြင့် အခန်းတွင်း အပူရှိန်ကို ထိန်းညှိရင်း တဖြည်းဖြည်း အေးမြစေခြင်းကြောင့် နေပူထဲမှပြန်လာ၍ အပူရှပ်ခြင်းမျိုး မဖြစ်စေပါ။
Gree အမှတ်တံဆိပ် Energy Saving2Ways Swing လေအေးပေးစက် သည် ရေပမာဏ (၇)လီတာ ၀င်ဆံ့နိုင်ပြီး ပျားအုံသဏ္ဍာန် လေစစ်ဇကာပါဝင်သည့်အတွက် လေကိုပိုမိုသန့်စင်စေပါသည်။ ထို့ပြင် မိမိ ပိတ်လိုသော အချိန်အား မှတ်သားထားနိုင်ပြီး အဆင့် (၃)ဆင့်ဖြင့် လေကိုရရှိနိုင်သည်။ လေအားကို လိုအပ်သလို Normal, Natural and Sleep အစရှိသဖြင့် ပုံစံ(၃)မျိုးဖြင့် ပြောင်းလဲနိုင်ပြီး မျက်နှာပြင်နှစ်ဖက်သို့ အလိုအလျောက် လေအားပေးနိုင်ပါသည်။ (၃၆၀ံ) အပြည့် ဘီးလုံးအား လှည့်ပတ်နိုင်သည့်အပြင် အဝေးထိန်း
Ceiling system T grid
1.The most advanced turbo fan 2. Line-shape keeps enough capacity 3.Keep fresh within the shortest time 4.Environment-friendly material Advantages- Own and produce various types of car refrigerators for domestic demand and export. Cooperate with the Korean enterprise.Equipped with the most advanced technology for new productions among the industry.Produce the first mix-type detached refrigerator. (applying for patent).The only China-Korea joint enterprise to produce car refrigerator. Commercialize the new energy-saving technology and freezing technology according to the refrigerator market.
Myanmar 's largest B2B marketplace for Electricity,Electronics and communication products in Myanmar. You can buy and sell aircon,air compressor,refrigerator in Myanmar. You can order from online or just see information online and buy directly from their showroom.You can order from BaganMart in express order or negotiate price in quotation process.You can give review good or bad.